Isihelegu kubhubha oonogada ekliniki | Ilisolezwe
Isihelegu kubhubha oonogada ekliniki
Iindaba / 14 June 2017, 2:44pm / Sithandiwe Velaphi
ABASEBENZI bekliniki yaseBaziya eMthatha basothukile bengayikholelwa into yokubhubha koonogada ababini bale kliniki emva kwesihelegu zokurhaxwa ngumsi wesishushubezi abebeyothile.
Ngokwesithethi sesebe lezempilo eMpuma Koloni uSizwe Kupelo abanogada babonwe ngentseni yangoLwesithathu. “Ababini kubo bafunyenwe sele bebhubhile logama omnye ekwimeko embi esibhedlele,” utshilo uKupelo.
Abanogada kukholeleka ukuba barhaxwe ngumsi ophuma kwisishushubezi eso bebesibasile nanjengoko amaqondo obushushu ephantsi kule veki. Amagama wabo babhubhileyo akakabhengezwa nanjengoko, ngokokokutsho kukaKupelo, izihlobo bezingekaxelelwa zonke. Izolo, uKupelo ebephelele nje ekudizeni ukuba amaxhoba ngabantu abangamadoda.
UKupelo uthi abanogada barhaxwe luhlobo lwerhasi ekuthiwa yiCarbon Monoxide, uhlobo lwerhasi engavakaliyo ngokwevuma kodwa ethi yakubaninzi iwugqibe umoya wokuphefumla nto leyo iye ikhokelele ekubhubheni.